नर्सले अस्पतालको बेडमा दशैंको टीका लगाई दिदा बिरामीको मुहारमा छाएको खुसी ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / नर्सले अस्पतालको बेडमा दशैंको टीका लगाई दिदा बिरामीको मुहारमा छाएको खुसी !
admin October 16, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 118 Views
नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैकाे सबैले आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार रमाइलो गरेर मनाउँदै गर्दा अस्पतालमा उपचारार्थ रहेका बिरामीहरुले बेडमा नै टीका लगाएर दशैं मनाएका छन् ।
भेरी अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाका भर्ना भएका बिरामीहरुलाई त्यहाँ कार्यरत नर्सिङ स्टाफ पार्बती बुढाथोकीले बिरामीलाई दशैंको टीका लगाई दिएर उनीहरुलाई घरको सम्झना बिर्साउने कोशिस गरेकी छिन् । उनले बिरामीलाई टीका लगाइ दिएर फलफूल दिइन भने अाफुले पनि बिरामीको हातबाट टीका लगाएको बताइन् ।
दशैमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा ज्येष्ठ नागरिक दुःखी !
बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ की ९० वर्षीया बसुन्धरा शर्माको यस वर्षको दसैँ खल्लो भएको छ। सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेर दसैँका लागि आवश्यक तयारी गर्ने योजना बनाएकी शर्माले भत्ता नपाएपछि सबै योजना भताभुंग भएका हुन् ।
बसुन्धरा निसन्तान हुन्। विवाह गरेको एक साताभित्रै श्रीमानको निधन भएपछि उनी एकल जीवन बिताउँदै आएकी छन्। घरमा दुई चार पैसा कमाइदिने कोही छैनन् । गत वर्षको बर्खामा पहिरोले घर भासिएपछि जैमिनी नगरपालिकाले ओत लाग्ने घर बनाइदिएको छ ।
तर निमेक गरेर खाने उमेर छैन। पर्दाको घडीमा काँध थाप्ने छोराछोरी छैनन्। बिहान बेलुकी हातमुख जोर्ने सहयोगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो। यस वर्षको दसैँमा भत्ता नपाएपछि उनी निरास बनेकी छन् । नगरपालिकाले अख्तियारी ढिला आएको भन्दै समयमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बैंकमा पठाउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आशामा दसैँ मनाउने विपन्न परिवारलाई समस्या भएको छ ।
‘हामीले बैंकको खातामा पैसा पठाइसकेका छौं, बैंकले पुर्‍याउँदै होला,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले भने। स्थानीय तहबाट ढिला गरी रकम पठाउँदा बाँड्ने समय नपुगेको बैंक कर्मचारीको भनाइ छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट अख्तियारी ढिला प्राप्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निकासा भइसकेको रकमसमेत लक्षित समूहलाई बाँड्न ढिला हुनेलगायतका कारणले लक्षित समूह भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
तमानखोला गाउँपालिकाले आइतबार मात्रै बैंकमा पैसा पठाएको थियो। दसैँ बिदा हुन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम बैंकमा पठाइएकाले दसैँअघि लक्षित समूहले भत्ता पाउन नसक्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीको भनाइ छ। लेखा अधिकृतको सरुवालगायतका कारण समयमा निकासा दिन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बरेङ गाउँपालिकामा पनि भत्ता रकम बाँड्न ढिला भएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेको छैन। भत्ताको आशामा लक्षित वर्ग बैंकमा धाए पनि नगरपालिकाले भत्ता नपठाएको जवाफ पाउने गरेका छन्। आफ्नो पेन्सन नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दसैँका लागि खुद्रा बनाउने र दसैँ खर्चको जोहो गर्ने आधार भत्ता रकम हो ।
नगरपालिकाले आइतबार साँझ मात्रा चेक पठाएको गरिमा विकास बैंक बागलुङ शाखाका प्रमुख ओमप्रकाश शर्मा पौडेलको भनाइ छ। ढिला गरी चेक प्राप्त हुँदा दसैँअघि भत्ता बाँड्न समस्या भएको हो। सम्झौताअनुसार स्थानीय तहले १५ दिनअघि चेक दिनुपर्छ। चेक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा हुनुपर्ने शाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको अधिकांश वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको छ। ढिलो भए पनि दसैँअघि नै सबैले भत्ता पाउनेगरी १५ असोजमै बैंकमा भत्ता पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चूर्णबहादुर कार्कीले बताएबैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वितरण हुने भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउन मात्रै दुई दिन समय लाग्ने गरेको बैंक कर्मचारीको भनाइ छ ।
Previous सपना रोकायका कारण चर्चामा आएका विनयजंग बस्नेतले अन्तत गरे बिहे !
Next मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नी यति राम्ररी श्रीमति र बच्चालाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी !